Home मनोरन्जन भ्वाइस जित्न डलर खर्च गरेको आरोपबारे किरणको जवाफ, किन मागे माफी ?
१५ भाद्र २०७८, मंगलवार १९:२४
इटहरी/ नेपालमा हुने रियालिटी शो मा उठ्ने मुख्य आलोचनाको बिषय हो भिटिङ । बिजेताको लागि निर्णायकको भन्दा भोटको अधिकार बढी हुने भएपछि राम्रो गायिकी भएका वा कला भएका प्रतिभा पछि पर्यो भन्ने आरोप आयोजकलाई लाग्दै आइरहेको छ ।
यता पछिल्लो समय सम्पन्न भएको भ्वाइस अफ नेपाल तेश्रो संस्करणमा पनि यो कुरा उठ्यो । बिजेता भएका किरण गजमेरले डलर खर्च गरेर जितेको आरोप लाग्यो ।
भिडियोमा हेर्नुस् यो आरोपबारे किरणको जवाफभुटानी शरणार्थी रहेका किरण अमेरिका बस्दै आएका थिए । उनको भ्वाइसमा गायन कलाको पनि राम्रै चर्चा थियो । तर, बिजेता भैसकेपछी भने उनले डलर खर्च गरेर उपाधिको हकदार भएको चर्चा चल्न थाल्यो । प्रस्तुत भिडियो कुराकानी गजमेरले माफी पनि मागेका छन् ।
आफुले भ्वाइस जितेको कारणले अन्य प्रतिष्पर्धीका समर्थकहरु संग उनले माफी मागेका हुन् । उनले भ्वाइस जितेसंगै आफुले नेपाली नागरिकता पाएको महसुस गरेका थिए भने पश्चिममा १ र पुर्वम २ गरि जम्मा ३ ओटा एम्बुलेन्स सहयोग समेत गर्दैछन् ।
पछाडि पोस्टके गरिन् त्यस्तो काजोलले ? शाहरुख खानका छोरा अब्रामले काजोललाई मन पराउँदैनन्
अगाडि पोस्टकाठमाडौं–कोलम्बोबीच सिधा हवाई सेवा सञ्चालन, श्रीलंकन एयरले थाल्यो उडान